Vaovao - Enviro sy Michelin dia miombon-kevitra amin'ny lafiny fiaraha-miasa stratejika
Enviro sy Michelin dia miombon-kevitra amin'ny lafiny fiaraha-miasa stratejika
Stockholm-Scandinavian Environmental Systems (Enviro) sy Michelin dia namarana ny antsipirian'ny fiaraha-miasa stratejika fanodinana kodiarana, enim-bolana taty aoriana noho ny nandrasana voalohany.
Ny roa tonta dia nahavita fifanarahana momba ny fepetra fototra amin'ny fananganana toby fanodinana kodiarana fiaraha-miasa sy fifanarahana momba ny fifanarahana fahazoan-dàlana mifehy ny fampiasa amin'ny teknolojia pyrolysis enviro kodiarana. Nampandrenesina tamin'ny 22 Desambra i Enviro.
Ireo orinasa roa ireo dia nanambara ny fiaraha-miasa kasaina hatao amin'ny volana aprily, miaraka amin'ny tanjona hamita ny fifanakalozana amin'ny volana jona, miaraka amin'ny tanjon'ny fampiasana ny teknolojia Enviro hamerenana amin'ny laoniny ireo fitaovana vita amin'ny fingotra. Ao anatin'ny fifanakalozana dia nahazo tombony 20% i Michelin tao amin'ny orinasa soedoà.
Araka ny fe-potoana nifanarahana, i Michelin dia manan-jo hanangana orinasa fanodinana azy manokana mifototra amin'ny haitao Enviro.
Rehefa manangana ozinina toy izany i Michelin dia mandoa vola enviro indray mandeha an'i Enviro ary mandoa onitra miorina amin'ny isan-jaton'ny varotra ao amin'ilay orinasa.
Araka ny fitsipiky ny Enviro, ny fifanarahana fahazoan-dàlana dia manan-kery hatramin'ny taona 2035, ary manan-jo hanohy hanangana zavamaniry fanodinana entana miaraka amin'ny antoko hafa koa ny orinasa.
Ny filohan'ny Enviro, Alf Blomqvist dia nilaza hoe: "Na eo aza ny areti-mandringana sy ny fanemorana taty aoriana, dia afaka namita fifanarahana hametraka fiaraha-miasa stratejika miaraka amin'i Michelin izahay."
Nilaza i Blomqvist fa “fifanarahana lehibe” lehibe ho an'ny Skandinavian Environmental Systems ny fifanarahana, ary izy io koa dia “fanamarinana tena lehibe ny teknolojia misy antsika.”
Hoy izy: "Tao anatin'ny taona iray izay nanasarotanay ny fiaraha-miangona sy ny fandaharam-potoanan'ny fiaraha-miasa ho avy, dia nahavita nifanaraka tamin'ireto toro lalana lehibe ireto izahay."
Na dia maty aza ny fifampiraharahana noho i Covid, nilaza i Blomqvist fa ny fahatarana dia nanome fotoana bebe kokoa an'i Michelin sy ireo mpamokatra iraisam-pirenena hafa hitsapana ny mainty karbaona azon'i Enviro.
Ny fifanarahana dia azo ekena amin'ny fankatoavana farany an'ny tompon'andraikitra Enviro amin'ny fivoriana ankapobeny tsy tapaka izay hatao amin'ny volana Janoary amin'ny taona ho avy.
Raiso ny vaovao farany miantraika amin'ny indostrian'ny fingotra eropeana manomboka amin'ny vaovao an-tsoratra sy ny vaovao an-tserasera, manomboka amin'ny vaovao lehibe ka hatramin'ny famakafakana mazava.
@ Gazety robina eropeana 2019. Zo rehetra voatokana. Mifandraisa aminay Gazety Eoropeana Rubber, Crain Communication LTD, EC2V 8EY, 11 Ironmonger Lane, London, UK
Fotoana fandefasana: Jan-16-2021
Batch Pyrolysis Plant, Tyro Pyrolysis, Fambolena Pyrolysis mitohy, Fanadiovana plastika maloto, Masinina fanodinana fako, Masinina fanodinana plastika,